UNDP, UNHCR and the Government of the Union of Myanmar extend MoU | United Nations in Myanmar
The UN Development Programme (UNDP), and the UN Refugee Agency (UNHCR), today agreed with the Government of the Union of Myanmar to extend the tripartite Memorandum of Understanding (MoU) for activities in Rakhine State.
The exchange of letters was signed by the Myanmar Ministry of Labour, Immigration, and Population, and by representatives of UNDP and UNHCR in Naypyidaw, Myanmar, and will extend cooperation through June 2021.
This latest extension of the MoU comes amid ongoing armed conflict leading to increased humanitarian needs among all communities across the state, and deepening the operational challenges faced by UNDP, UNHCR and partner organizations. Consistent access for UNDP, UNHCR and their partners is essential to ensure expanded implementation of the MoU.
During the extended implementation period, efforts to carry out assessments in Rathedaung township and medium-term planning for inclusive socio-economic development are priorities.
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဥ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးတို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း
ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) နှင့် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ (UNHCR) တို့သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုံးပွင့်ဆိုင်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရန် ယနေ့သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား အလုပ်သမား၊လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား၀န်ကြီးဌာန၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်နှင့် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီတို့၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်များက နေပြည်တော်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လအထိ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤနားလည်မှုစာချွန်လွှာသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များအား မိမိဆန္ဒအလျောက်လုံခြုံစွာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောနေရပ်ပြန်ခြင်းအတွက် စိတ်ချလုံခြုံသော အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ် လာစေရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင်ပါ၀င်ကူညီရန်နင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်တွင် နေထိုင်ကြ သည့် လူမှု အသိုက်အ၀န်းအားလုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်စွမ်းရှိသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ဤမူဘောင်ကို ဇွန်လ (၆)ရက် ၂၀၁၈တွင် စတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး၊ မေလ ၂၀၁၉တွင်လည်း သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
UNDP နှင့် UNHCR မှ သဘောတူညီချက်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုကြိုဆိုပြီး ယခုကဲ့သို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါသည် -
“ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒုက္ခသည်များ မိမိတို့သဘောဆန္ဒအလျောက် နေရပ်ပြန်လာတဲ့အခြေ‌အနေ မဖြစ်ပေါ်သေး သော်လည်း ယခု သဘောတူညီမှုစာချွန်လွှာအရ လက်ရှိကာလအထိ မောင်တောမြို့နယ်နဲ့ ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်များမှ ကျေးရွာပေါင်း၁၂၀ကျော်တွင် လက်ငင်းလိုအပ်ချက်များဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ရန် UNHCR နှင့် UNDP အဖွဲ့များအား ကွင်းဆင်းလေ့လာခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် လူပေါင်း၂၆၀၀ကျော် နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူတို့၏ လူမှုအသိုက်အ၀န်းအတွက် ဉီးစားပေးလုပ်ငန်းများ၊ သူတို့၏လိုအပ်ချက်တွေကို အကောင်း ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ လူမှုအသိုက်အ၀န်းများကြား လူမှုကျွမ်း၀င်ရင်းနှီးပေါင်းစပ်မှု ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။”
ကနဦးနားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးချိန်ကစကာ သောက်သုံးရေ အရည်အသွေး တိုးမြင့်လာစေရေး၊ ကျောင်းနှင့်လမ်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများနှင့် ၀င်ငွေ တိုးပွားစေမည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် အထူးလိုအပ်ချက်ရှိသူများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အပါအ၀င် သက်ရောက်မှုမြန်ဆန်စေသည့်စီမံကိန်းများ (QIPs) စုစုပေါင်း ၇၅ခုကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ သတ္တမအကြိမ်မြောက် ကွင်းဆင်းလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ယခုဆောင်ရွက်ရန်ရှိသော်လည်း COVID-19 အခြေအနေကြောင့် ရပ်ဆိုင်းထားရပါသည်။ သို့သော်လည်း လူမှုအသိုင်းအ၀န်းများအကြား COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာများမြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ယခုအကြိမ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းသည် ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် လက်နက် ကိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းများအားလုံး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပိုမိုလိုအပ်နေချိန်နှင့် UNDP၊ UNHCR နှင့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများရင်ဆိုင်နေရသော လုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုများ ပိုမို နက်ရှိုင်းလာချိန်တွင် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများအကြား အစဉ်တစိုက်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုသည် UNDP၊ UNHCR နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာပါ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါပါသည်။
လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့်ကာလအတွင်း၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အားလုံးပါ၀င်နိုင်သည့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကာလ လတ်စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးများသည် ဉီးစားပေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှအခြေအနေများအပေါ် UNDP နှင့် UNHCR မှ မှတ်ချက်ပြုပြောကြားရာတွင် -
“ဒုက္ခသည်များမိမိဆန္ဒအလျောက်လုံခြုံစွာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနေရပ်ပြန်ခြင်းအတွက် သေချာသောအခြေအနေ တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ဆဲလူများ၏ လူ့အခွင့်အရေးခံစားခွင့်များ တိုးတက်လာစေရန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏တာ၀န်ဖြစ်ပြီး၊ UNDP နှင့် UNHCR တို့သည် ဤလုပ်ငန်း အတွက် ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား လွတ်လပ်စွာသွားလာ နိုင်ခွင့်ရရှိစေခြင်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်စေရန် လမ်းဖွင့် ပေးခြင်းနှင့် အသက်မွေး၀မ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် အခြေခံပြည်သူ့၀န်ဆောင်မှုများ ပိုမိုရရှိစေနိုင်ခြင်း အပါ အ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များကို အပြည့်အ၀အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ပဋိပက္ခ၏အဓိကအကြောင်းရင်းခံများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုလိုပါသည်။”